Bartimäus - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-03 > Bartimaeus
ကလေးတွေကပုံပြင်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရယ်မောစေတယ်၊ ​​ငိုကြွေးတယ်၊ သင်ခန်းစာတွေသင်ပေးတယ်။ whoဝံဂေလိဆရာများသည်ယေရှုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရုံတင်မကဘဲသူသည်သူဘာလုပ်ခဲ့သနည်း၊ သူနှင့်သူမည်သူမည်ဝါတွေ့သည်ကိုသူ့အကြောင်းပြောပြစရာများများစားစားပြောခဲ့သည်။
Bartimaeus ၏ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ရှုကြပါစို့။ “ယေရိခေါမြို့သို့ ရောက်ကြ၏။ ယေရိခေါမြို့မှ ထွက်ကြွတော်မူသောအခါ၊ တပည့်တော်များနှင့် လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် တိမော၏သား ဗာတိမဲ၊ 10,46).
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Bartimaeus ဟာ သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို သိကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ ဖုံးကွယ်ရန်မကြိုးစားဘဲ “ဟစ်အော်” (း၄၇)။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုသာဖြေရှင်းပေးနိုင်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ Bartimaeus ၏လိုအပ်ချက်မှာသိသာထင်ရှားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်ကယ်တင်ရှင်၏အကူအညီတောင်းခံသင့်သည့်နေရာများရှိသည်။ သင့်ကိုယ်သင်မေးရန် Bartimaeus ကအားပေးသည် - သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်သူကဲ့သို့အကူအညီတောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
Bartimaeus သည် သူ၏လိုအပ်ချက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ယေရှုအတွက် သူ့အတွက် ကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် အစပျိုးခဲ့သည်။ Bartimaeus က သူ့ကို ကူညီမယ့်သူဆိုတာ အတိအကျသိတဲ့အတွက် “ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှု၊ ငါ့ကို သနားတော်မူပါ” လို့ အော်ပြောခဲ့တယ်။ (အခန်းငယ် ၄၇) မေရှိယအမည်ဖြင့်၊ “ထိုအခါ မျက်စိကန်းသောသူတို့သည် မျက်စိပွင့်၍ နားပင်းသောသူတို့၏ နားတို့သည် ပွင့်ကြလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၃။5,5).
ဆရာ့ကို နှောက်ယှက်ဖို့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ အသံတွေကို သူ မကြားလိုက်ဘူး။ ဒါဝိဒ်၏သားတော်၊ အကျွန်ုပ်ကို သနားတော်မူပါ။ (မာကု 10,48) ယေရှု​က ရပ်​ပြီး “ခေါ်​ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်က ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အော်ဟစ်သံကို ကြားသောအခါ ရပ်တန့်တော်မူ၏။ ဘယ်အရာက အရေးကြီးသလဲ၊ အရေးမကြီးဘူးဆိုတာ Bartimaeus သိတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ဇာတ်လမ်းထဲမှာ သူက သူ့ရင်ခွင်ကနေ ထွက်သွားပြီး ယေရှုဆီ ပြေးသွားခဲ့တယ် (အခန်းငယ် ၅၀)။ သူ၏ဝတ်လုံသည် သူ့အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိပေမည်၊ သို့သော် ယေရှုထံတော်သို့ လာရန် မည်သည့်အရာကမျှ တားဆီးထားခြင်းမရှိပါ။ သင့်ဘဝမှာ တကယ်အရေးမကြီးပေမယ့် သင်တန်ဖိုးထားလွန်းတဲ့ အရာတွေက ဘာတွေလဲ။ သခင်ယေရှုအနီးသို့ရောက်ရန် အဘယ်အရာများကို စွန့်လွှတ်သင့်သနည်း။
“ယေရှုက၊ သွားလော့၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်ကို ကျန်းမာစေပြီ။ ချက်ခြင်းမြင်၍ လမ်း၌လိုက်လေ၏။” (း၅၂)။ ယေရှုခရစ်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်အား ဝိညာဉ်ရေးအရ မြင်နိုင်စေသည်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဝိညာဉ်ရေးမျက်စိကွယ်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်းစေပြီး ယေရှုနောက်သို့ လိုက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ဗာတိမဲသည် ယေရှု၏ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးနောက် လမ်းခရီးတွင် လိုက်သွားခဲ့သည်။ သူသည် သခင်ယေရှုနှင့် လျှောက်လှမ်းလိုပြီး သူ၏ ဇာတ်ကြောင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် Bartimaeus ကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်စိကန်းသူများ၊ ငတ်မွတ်သူများနှင့်ယေရှု၏ရောဂါပျောက်ကင်းရန်လိုအပ်နေသည်။ အရေးမပါသည့်အရာကိုဖယ်ထားကြစို့။ ယေရှုကျွန်ုပ်တို့ကိုကုသပေးပြီးသူ့ခရီးစဉ်တွင်သူ့နောက်သို့လိုက်ပါစေ။